DSLinux: Linux oo ku shaqeynaya Nintendo DS | Laga soo bilaabo Linux
auroszx | | Qaybinta, GNU / Linux, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Waan ogaa inay suurtagal tahay rakibi luter a PS3, ee a Wii, xitaa ku orod a mobile Android (oo lafteeda horayba ula shaqeyneysa Linux Kernel) oo ku arag server VNC ah ... Laakiin, ee a nintendo ds? Uma maleyneynin in Linux ay ka shaqeyn doonto qalab wata qalab sida daciif ah u shaqeynaya ... waana dhayalsaday. Waxaan ku tusi doonaa sida loo rakibo oo loo qaabeeyo isticmaalkaaga, ma ahan wax dhib badan haba yaraatee laakiin waxay u baahan tahay qibrad u leh qadka amarka si loo isticmaalo
DSLinux waa qaybsi yar Linux ku qoran C y Isku soo wada duub (ARM). Waxay awood u leedahay inay ku dhex ordo Nintendo DS (Fat iyo Lite, ma ahan DSi ama DSiXL) iyadoo la adeegsanayo kaar ka soo baxa Slot 1 ama 2 (DS ama GBA). Waa wax cajiib ah in ay ku shaqeyn karto processor-ka ARM sida ugu hooseysa iyo kaliya 4MB oo RAM ah, taas oo xaqiijinaysa dabacsanaanta Linux marka laga hadlayo Qalabka.
Waxaa ku jira amarrada aasaasiga ah (cp, mkdir, wget, rm ...), qaar ka mid ah codsiyada terminal (sida Links, madplay, nano ...) iyo ciyaaraha terminal (advent4, quudhin iyo qaar ka mid ah ciyaaraha bilaashka ah ee ''BBSD'). Waa kuwan faa'iidooyinkiisa:
Inaad ku raaxeysato Linux meel kasta oo aan aadno (waxay dareemeysaa sida a Linux geek xD).
Muusiga ku darso, labadaba SD iyo WiFi.
Ku faafiso internetka Iskuxirayaasha.
Muusig la ciyaar waalan.
Tafatir qoraalada leh nano y vi.
Hawlo badan (waxay u baahan tahay ballaadhinta RAM Slot 2).
Wanaagsan, sax? Hadda, sidoo kale waxay leedahay faa'iido darro:
Qayb ka mid ah codsiyada iyo qaabka sawirada (oo leh PIXIL) waxay u baahan yihiin ballaarin RAM ah.
Ma qaadi karno homebrew ama ciyaaro isaga ka yimid (kan aannu u malaynaynay?).
Maaha mid ku habboon DSi (XL) ama 3DS (qalabka kombiyuutarka lama taageerayo).
Waxay ka baxday horumarkii (qayb ahaan).
Xirmo aan badnayn ayaa la heli karaa, ma laha keydad ama wax la mid ah (in kasta oo ay suurtagal tahay in baakadaha lagu rakibo ARM si ay ula socoto DSLinux).
Weli, haddii aan dooneyno inaan u isticmaalno si kasta oo aan u tijaabinno, markaa waan kuu sheegi doonaa sida.
Hagaag, waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan aragno hadii aan buuxinay shuruudaha:
Un Nintendo DS Fat (kan ugu horreeya, oo qaro weyn) ama Lite (ilbiriqsiyadu, kuwaas oo dhuuban). DSLinux aan la jaan qaadi karin DSi, kayarna DSiXL ama 3DS.
Una Flashcard de Afyare 1 ama Afyare 2, way fiicantahay hadday ka timaaddo Afka 1qof kasta oo taageera DLDI is-xoqitaan, badankood way qabtaan).
Lagu taliyay: a RAM Slot 2 ballaarinta (ugu yaraan hal Opera Expansion ama hal EZ-V 3 1) loogu talagalay qaabka garaafka iyo qeyb ka mid ah barnaamijyada.
Ikhtiyaari: Xiriirka WiFi, ee daalacashada iyo cayaaraha (haa, waad maqashay si sax ah, waad daalaysan kartaa). Dhammaan jiheeyeyaasha ayaa loo qaabeeyey si ka duwan sidaa darteed qaarna lama taageeri karo… sida Intelinet Wireless 150N oo kale : '(
Uguyaraan 150MB booska bilaashka ah ee kaarka SD-ka ee Flashcard-keena.
Hadda, waa inaan soo dejisanaa DSLinux, halkan ku yaal bogga soo dejinta. Sidoo kale haddii aad u maleyneyso inaad tahay halyeeyo, waad ku soo ururin kartaa gacanta (laga bilaabo Linux, dabcan).
Xaaladdayda, waan hoos u dhigay Xidhmada DLDI, kaas oo u shaqeeya kaararka flashka badankood (dslinux-dldi.tgz). Haddii aan ka socon doonno GBA Movie Player, soo dejiso dhismaha labaad. Kuwa kale waa wax aan macquul aheyn inaan isticmaalno, sidaa darteed waan iska indho tiri doonnaa 😛
Waxa ku xigaa waa in la furo khariidadda.
Waan heli doonnaa laba fayl (dslinux.nds iyo dslinuxm.nds) iyo a galka wac Linux Farqiga u dhexeeya labada faylal ayaa ah in kan labaad uu leeyahay qaar ka mid ah barnaamijyada wax laga beddelay si looga faa'iideysto RAM-ka dheeriga ah, sida Nano-X y waalan.
Faylka Linux waxaan ka heli qaar ka mid ah fayl classic waa dhan distro, sida iwm, var, lib, usr, iyo dabcan, guriga.
Faylka ugu horeeya iyo galka ayaa kufilan, sidaa darteed waxaan kuqorineynaa kaarka SD-ga anaga oo isticmaaleyna aqriyaha kaarka micro micro
Marka wax waliba diyaar yihiin, waxaan gelineynaa micro SD-ka kaarka, kaarka ku jira DS-gaaga, waana daarnaa.
Waxaan socodsiineynaa barnaamijka DSLinux (Waxay ka taagan tahay wax ka badan maxaa yeelay astaanteedu waa Tux).
Waxay bilaabi doontaa inay bilowdo, ka dibna (haddii aan dooranno nooca DLDI) si otomaatig ah ayaa loo galin doonaa sida xidid. Haddii kale, isticmaaluhu waa xidid lambarka sirta ahna waa uClinux (la soco Xarfa weyn C).
Markaad gasho, astaamaha asalka ah (#) ayaa soo muuqan doona. Haddii aysan dooran nooca DLDI, waxay beddeli karaan lambarka sirta ah iyaga oo garaacaya passwd (taasi waa ikhtiyaari) iyo gelinta eray sir ah ugu yaraan 5 xaraf.
Abuuritaanka / wax ka beddelka rc.conf
Kuwii horeyba u lahaa khibradda Linux waxay ogaan doonaan rc.conf. Kuwa aan sameynin, waa fayl kaas oo qaabeynta nidaamka qalliinka lagu keydinayo. Xaaladdan oo kale, iyagu waa goobaha DSLinux. Faylkaan waa inuu ku yaal meesha Linux / iwm / rc.conf, laakiin haddaan hubino ma heli doonno. Sidaa darteed waa inaad abuurtaa, laakiin ha ka welwelin, horumariyayaashu waxay ku dareen goobaha aasaasiga ah isla galkaas fayl la yiraahdo dambiyada.
Waxa aan samayn doonno (doorbidayo kombuyuutarkeena, oo leh akhristaha kaarka micro SD) waa nuqul ka kooban dambiyada a rc.conf.
Gudaha gudihiisa waxaa ku yaal dejimaha aan wax ka beddeli karno, laakiin waxaan diiradda saari doonaa uun dhowr, waxyaabaha muhiimka ah.
Marka horeba, xaggee lagu sheegayaa magaca aqalka, Waa magaca kooxda waana badali karnaa haddii aan doono, inkasta oo aysan waxbadan ka caawinaynin ...
Markaas meesha ay ku qoran tahay «karti_network_on_boot«, Ayaa loogu talagalay Wifi inuu si otomaatig ah u bilaabo markuu bilaabayo DSLinux. Haddii ay rakibayaan WiFi, waxaan u beddeleynaa "OO WAA" (wax walba iyo xigashooyin). Haddii kale, waanu ku daynaynaa "MAYA".
Haddii aan leenahay xiriiro WiFi ah oo lagu qaabeeyey qunsuliyadayada, waan u adeegsan karnaa adigoo tiro ka dhigaya 1 illaa 3 (mid walboo wuxuu u dhigmaa tirada isku xirnaanta qalabkayaga, haddii aadan xusuusan, ka hubi ciyaar leh qaabkan ). Tani waxay kaliya la shaqeysaa Router, oo aan la shaqeyneyn Nintendo WiFi USB Connector. Haddii kale, waxaan uga tageynaa madhan.
Hadaan door bidno ku xir WiFi gacanta, aan degno, halka ay ku qoran tahay «nuxurka»Waxaan dhigeynaa magaca shabakada, ikhtiyaar ahaan, hoos «channel»Waxaan dhigeynaa kanaalka iyada oo DS-kayagu ku xirmi doono (kaliya haddii ay na siiso dhibaatooyin isku xirnaanta). Gudaha "xarafka»Kaga socdaa Fure WEP (Haddii aanaan adeegsan erayga sirta ah, wali wuu madhan yahay). Haddii routerkeenu aanu taageerin DHCP, ama aan doorbidno inaanu adeegsano IP-gu taagan, waxaan u qoondeynay «ip»Iyo«albaabMeelahooda kala duwan, hoosta waxaan ku qarinay maaskaro shabakad ah «shaashadda"iyo"warbaahin»(In kasta oo aanan garanayn waxa: / loogu talagalay), sidoo kale hal ama laba DNS.
Hadaan rabno beddel font laga bilaabo terminalka (in kastoo aan «burburay » nidaamka), xagga hoose, halka ay ku qoran tahay «font»Waxaan dhigeynaa«/usr/share/consolefonts/alt-8irán8.psf»(Wax walba iyo xigashooyin).
Taasi asal ahaan waa dejinta. Haddii ay wax kuu socon waayaan, iska jooji.
Haddii aad rabto, waad isku dayi kartaa xulashooyinka kale (waxaan kula talinayaa iyaga kaliya haddii aan leenahay ballaarin RAM ah).
Nagala shaqee tty (terminal) waa fududahay:
Suufka jihada: dhaqaaji tilmaamaha birqaya.
B: baarka bannaan
X: Bogga kor
Y: Bogga hoos
Sidaa darteed, waayo kor ama hoos "keydka" tty (terminal) aan riixno L + X iyo L + Y siday u kala horreeyaan.
DSLinux waxaa loo isticmaali karaa waxyaabo badan oo kala duwan, aad u tiro badan oo aan macquul aheyn in dhammaantood lagu sharaxo qodobkan. Sikastaba, waa kan qeybta isticmaalkiisa, halkaasoo aad kaheleyso sida loo isticmaalo internet-ka, loogu ciyaaro garoonka dhexdiisa, loo socodsiiyo qaabka garaafka (xoogaa aan xasillooneyn), sameysid shebekad internet ah, muusig lagu ciyaaro (iyo xitaa adigoo wata wget! : O) iyo in ka badan.
Sidoo kale, nasiib daro, DSLinux waa mashruuc laga tegey, ama halkii lagu saleeyey tabarucaad. Waxay xor u yihiin inay wax ka beddelaan koodhka ilaha ee ay jecel yihiin oo ay u soo rogaan isbeddelada (ama aan ahayn) tooda bogga rasmiga ah. Halkaas waxaad ka heli doontaa macluumaad badan oo ku saabsan horumarka iyo isticmaalka.
Salaan dhamaan akhristayaasha!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » DSLinux: Linux oo ku shaqeynaya Nintendo DS
Waxaan isku dayay inaan socodsiiyo (waxaan haystaa Lite) laakiin xayiraadahaas awgood waxaan go'aansaday inaanan markale iskudayin, xitaa waxaan ka fikiray inaan ku rakibo wiilasha ina adeerka ah si aan u arko haddii aan ku dhejin karo ciyaaro bilaash ah
Ha ka filin wax qabad fiican Wii sidoo kale, laakiin waa inay noqotaa mid aad u wanaagsan. In kabadan waxkasta maxaa yeelay (hadaanan khaldamin) Linux distro ee Wii wuxuu kusalaysan yahay Debian, waxaan ku aqriyay LXDE inay dheecaan badan leedahay.
Ma haysto kaar, waa inaan iibsadaa mid aan isku dayo, in kastoo aan rajaynayo inaanan waraabin ...
Haa, way adag tahay in la waraabiyo. Waxaan ku sameeyay in yar, wax xun ayaa ah in ballaadhinta RAM loo baahan yahay waxyaabaha ugu fiican: /
Waan ogaa laakiin dan kama lihi inaan tijaabiyo, nacalaa hada waan isku dayi lahaa waxaanan ku tuuray dhamaan qunsuliyadeyda fiidiyowga ciyaarta qashin qubka si aanan u qabatimo
Hagaag, waxaa jira Flashcarsd oo qiimo fiican leh, waxaan hayaa mid igu kiciyey ilaa € 20 waxaana u hayaa emulators iyo codsiyada qaar, "burcad badeed" ciyaartooy aad u yar, kuwa raritaanka aan laga sii deynin Yurub ama aan la daabicin.
Haa, ma jiraan ciyaaro badan sidii hore ... markaa waxaan baranayaa inaan barnaamij la sameeyo NFlib (NDS) mashruuc yar oo aan maanka ku hayo ...
Sidee Linux u socotaa Ps3 ??? Ma aanan isku dayin
Runtii ma waxaad dooneysaa inaad ku guuleysato bakhtiyaanasiibka adigoon ciyaarin? Waxba iskuma dayin waxna ma tarin
Ilaa PS3-kaaga la jabsaday mooyee (wuxuu leeyahay CFW 3.55 ama ka hooseeya) waxtar ma leh. Waa Ubuntu Feisty Fawn, markaa soo gabagabeeyo xoogaa gunaanad ah ...
Waad salaaman tahay, dhibaato ayaan qabaa, waa in FlashCard-kayga uu yahay R4i 3ds (www.r4i-gold.eu) markaan furona, waxay ka muuqataa shaashadda kor ku xusan oo xamuul ah halkaas ayeyna ku sii jirtaa marka ay ciyaarta caadiga ah .nds la cayaarto soo bax oo 2 ilbidhiqsi gudahood ayuu hoos udhacayaa rar iyo bar horumar haddii aad iga caawin karto sidii aan u shaqeyn lahaa waxaanan u adeegsaday nooc NDS ah (dufanka) mana shaqeynayo 3DS-ta aan haystona ma helayo gudaheeda maxaa yeelay waan cusbooneysiiyaa laakiin baruurta waxba ma tarayso waxaanan isku dayay inaan galo liiska faylka oo 2da shaashadooduna way madhan yihiin khabiir ayaan ku ahay mawduucan laakiin guud ahaan ds ma tago pc iyo wii laakiin qunsuliyadaan LA Nintendo DS igama aysan yeerin dareen badan
PS Waxaan hayaa nooca kaarka ee nooca ugu dambeeyay ee la heli karo ilaa maanta
Jawaab Eneko Torres Gomez
Chakra Linux 2011.12 waa la heli karaa